nyeinchansarpay.blogspot.com freelance blogging hodgepodge of unrestrained thoughts
တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယ ၂ နိုင်ငံစလုံးအနေနဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ အရ ဦးဆောင်မှုပေးမယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့် ပါတယ်။ ဒါဟာ စီးပွါးရေဦးဆောင်မှုသက်သက်မဟုတ်သလို နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှု သက်သက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကနေ့လိုအချိန်မှာ လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာအရ ဦးဆောင်မှုကို ပြဖို့ ဘယ်တုန်းကနဲ့မှ မတူအောင်ကို လိုအပ်နေတာပါ”
Posted by sayanyein at 7:15 AM 1 comment:
ကုလ လူ့အခွင့် အရေး မဟာမင်းကြီးက ဗမာအစိုးရနှင့် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံးကို နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ် ခုံးရုံးတင် ပြစ်ဒဏ် ချမှ ရမည်ဟု ပြော ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Hla Myint sharedapost.
Image may contain:2people, people sitting and child
Image may contain:3people, people standing and o
Image may contain:3people, people standing and outdoor
March 10 at 6:44pm
Kachin Independence Army (KIA) နှင့်
ဗမာ့ တပ်မတော်အကြား ၂၀၁၁ ခုနှစ် အပစ်
အခတ် ရပ်စဲရေး ပျက်ပြယ်သွားပြီးနောက်ပိုင်း
ကချင်လူမျိုး (၁၀၀,၀၀၀) ကျော်ကို ဗမာ အစိုး
ရက ၎င်းတို့ နေထိုင်ရာ အရပ်များမှ အတင်း
နိုင်ငံ့ အနောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်နေသော ရိုဟင်ဂျာ
အရေးနှင့် ကချင် - ဗမာ ပဋိပက္ခက ကွဲပြားသော်
လည်း ဗမာ စစ်သားများ၏ ပြည်သူလူထုအပေါ်
အကြမ်းဖက်ပုံကတော့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ကြရပြီး KBC ဒုက္ခသည်
စခန်းမှာနေထိုင်လျှက်ရှိတဲ့ ကချင် အမျိုးသား
(၂) ဦးဖြစ်သော 'Hpaugan Yaw (၆၅) နှစ်နှင့်
Nhkum Naw San (၃၅) နှစ်မှာ ဒီနှစ်ဆန်း
ဇန္နဝါရီလကထဲက ပျောက်ဆုံးသွားပြီး တပ်
မတော် စစ်ကြောင်းက ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း
နောက်ပိုင်းမှာ သိရှိရပြီးနောက် မနေ့ကတော့
၎င်းတို့ (၂) ဦး၏ အလောင်းကို စခန်းအနီးက
တောအုပ်ထဲမှာ တွေ့ရှိရတဲ့အခါ ဦးခေါင်းမှာ
သေနတ်ဒဏ်ရာနှင့် ပစ်သတ်ခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း
ရိုက်တာ သတင်းအရ သိရှိရပါတယ်။
Nhkum Naw San ကို (KIA) စစ်ဝတ်စုံ အတင်း
ဝတ်ခိုင်းပြီး ချိနဲ့အောင် ဝိုင်းရိုက်ပြီးမှ ပစ်သတ်
ခဲ့သည်ဟု အဖမ်းခံရသည့် အုပ်စုထဲမှ မျက်မြင်
သက်သေ တစ်ဦးက ပြောဆိုပါတယ်။
ကချင်လူမျိုးတွေကို ဗမာ့တပ်မတော် စစ်ကြောင်းက
ကြုံရင်ကြုံသလို "ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့် သတ်ဖြတ်ခြင်း
(Abduction and Murder)" တွေဟာ 'သင်ရိုး ညွှန်း
တမ်း ကျောင်းသုံးစာအုပ်' အရ ရခိုင်ပြည်မှာ ရိုဟင်
ဂျာတွေကို သတ်ဖြတ် မုဒိမ်းကျင့်သလိုပဲ ပုံမှန် ပြု
လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) နှစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ခရစ်ယာန်
ဘာသာရေး ကျောင်းဝင်းထဲမှာ မုဒိမ်းကျင့်
အသတ်ခံရတဲ့ ဆရာမလေး (၂) ဦး ကိစ္စမှာ
လည်း ယခုထိ တရားခံ မပေါ်ပါ။
ထို့ကြောင့်လည်း မနေ့က ကုလ လူ့အခွင့်
အရေး မဟာမင်းကြီးက ဗမာအစိုးရနှင့်
စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံးကို နိုင်ငံတကာ
ရာဇဝတ် ခုံးရုံးတင် ပြစ်ဒဏ် ချမှ ရမည်ဟု ပြော
၁၀ မတ် ၂၀၁၈။
Zhang Wuji ဒီခွေးက ဒီမှာဟောင်နေတာကိုး
Posted by sayanyein at 6:00 PM No comments:
Hla Myint " မသေမချင်း အုပ် ချုပ်တော. မဲ." စီကျင်း ပင် ဗမာမျိုးချစ် ကြီးတို. သတိ ၁ ၂ ၃ ၁ လေးဖက်ထောက် ကြ ၁ ၂ ၃ ၁ လေးဖက်ထောက် ကြ
Profile: China's President Xi Jinping - BBC News - BBC.com
Hla Myint Profile: China's President Xi Jinping - BBC News - BBC.com
Tinhtet Sein It's the philosophy of communism rule over the world and they see in him as the best candidate. I never like the idea of " Big brother is watching you". Remember George Orwell's 1984.
Hla Myint " မသေမချင်း အုပ် ချုပ်တော. မဲ." စီကျင်း ပင်
ဗမာမျိုးချစ် ကြီးတို. သတိ
၁ ၂ ၃ ၁ လေးဖက်ထောက် ကြ
Posted by sayanyein at 9:57 PM 1 comment:
Moe Zaw added3new photos. March2at 8:56am · #ဒီထက်ရှင်းတာဘာမှမရှိဘူး သီဟသူရ ဗိုလ်ချူပ်ကြီးတင်အောင်မြင့်ဦး( ငြိမ်း ) ကတော့ အမှန်တွေကို ထောက်ပြလိုက်ပါပြီ ။
Aung Myint shared Moe Zaw's post.
Moe Zaw added3new photos.
March2at 8:56am ·
ဗိုလ်ချူပ်ကြီးတင်အောင်မြင့်ဦး( ငြိမ်း ) ကတော့
အမှန်တွေကို ထောက်ပြလိုက်ပါပြီ ။
ဒို့ တိုင်းပြည်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာပိုမိုရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့ နှိုင်ကြဘို့ အတွက်အောက်ပါသတင်းကိုရှယ်ယာပေးလိုက်ပါသည်။
ထပ်ပြောလိုသည်။ဒို့ မြန်မာတွေ၏ထွက်ပေါက်သည်၁၉၄၇ခုဒီမိုကရေစီဖွဲ့ စည်းပုံကိုအမြန်ပြန်သုံးကြဘို့ သာရှိသည်။လက်ရှိမွေတပိုင်းဖါးတပိုင်းအစိုးရကိုအယုံအကြည်မရှိအဆိုတင်သွင်းပြီးဖြုတ်ချကြဘို့လည်းအချိန်ရောက်ပါပြီ။
မိမိတို့ ၏အကျိုးကိုမဆောင်ရွက်သောသူများကိုမိမိတို့ ကအားနာစရာလိုမည်မထင်တော့ပါ။နိုင်ငံရေးအရလုပ်စရာရှိတာကိုလုပ်ကြဘို့ -တောင်းဆိုကြဘို့ သာလိုပေပြီ။
အစိုးရသစ် စတက်လာတော့ လက်ထဲမှာ
ဘာငွေမှ မရှိလို့ သန်းတစ်ရာလောက် အကူအညီရဖို့
အကူအညီအတွက် ကတိတွေ ရလာပြီးကာမှ
ရခိုင်အရေး ထဖြစ်တော့ အကူအညီတွေ
တော်တော်များများ ပြန်ရုတ်သိမ်းသွားကြတယ် ။
EU က စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေကို
သူတို့အတွက်က အေးဆေးပါပဲဗျာ ၊
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၈၀ ရှိတယ်လို့
အစိုးရ ပြည်သူဆီက ရတဲ့အခွန်က ဘဏ္ဏာနှစ်
တစ်နှစ်မှာ ကျပ်ဘီလီယံ ၅၀၀၀ လောက်ပဲရှိတယ်
ပြောရရင်တော့ ဦးပိုင်ရဲ့ အစွန်းထွက်လောက်တောင်
အခြားမကြည့်နဲ့ Mytel လို ဆက်သွယ်ရေး
ကုမ္ပဏီမှာ ဦးပိုင်လက်အောက်က MEC က
ဒေါ်လာ သန်းထောင်ချီ ပက်ကနဲ
ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်ပေမယ့် အစိုးရက မလုပ်နိုင်ပာဘူးဗျာ။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ အစိုးရက
စစ်တပ်လောက် မချမ်းသာဘူး ဆိုတာ
Mytel နဲ့တင် သိနိုင်ပာတယ် ။
တိုင်းပြည်အတွက် သာမက တပ်မတော်သားတွေနဲ့
ပြည်သူလူထုမှာပါ ဘယ်လို အကျိုးတရားတွေ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတကာအပေါ် တင်ရှိနေတဲ့
ကြွေးမှီက ဒေါ်လာ ၉ ဘီလီယံကျော် ပဲရှိတယ် ။
နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်း အနေနဲ့ ကြွေး ၂၄၅,၀၀၀ စီရှိနေတယ် ။
ဦးပိုင်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ဘီလီယံ ၈၀ ကို
တပ်မတော်သား ၅ သိန်းအတွက် ပြန်ခွဲမယ်ဆိုရင်
တပ်မတော်သားတစ်ဦး အတွက် ကျပ်သန်းပေါင်း
၂၁၆ သန်းဝေခွဲပေးလို့ရတယ် ။
ပြည်သူ သန်း ၅၀ အတွက် ခွဲဝေပေးမယ်ဆိုရင်
ပြည်သူတစ်ဦးကို ၂၁၆၀,၀၀၀ စီ ခွဲဝေပေးလို့ရတယ်
အကြွေး တစ်ယောက် ၂၄၅,၀၀၀ စီဆပ်ပြီးရင်တောင်
တစ်ယောက်စီအတွက် ၁,၉၁၅,၀၀၀ စီကျန်သေးတယ်
ဘာခံစားခွင့်မှ မရပဲ လက်တစ်ဆုပ်စာ လူတစ်စုပဲ
အဖွဲ့အစည်းကို ပြန်ပြီး ကာကွယ်ပေးနေကြတယ်ဗျ ။
နိုင်ငံတော်က မြေ၊ အဆောက်အဦး၊ ငွေကြေး
လုပ်အား စတဲ့ အရင်းအနှီးနဲ့ မတည်ထားတဲ့
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို တတိုင်းပြည်လုံးက
ပြည်သူတွေ ခံစားစံစားခွင့် မရပဲ
လို့ တနေ့အခါတစ်ရာလောက် ရွတ်ပြနေသူတွေက
ရယူမှု အနဲဆုံးနဲ့ ပေးဆပ်မှု အများဆုံး
သိမ်းကျုံးပေးဆပ်မဝ ဖြစ်နေကြတာကြောင့် ...
တပ်မတော်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးက ခွာနိုင်မှာ မဟုတ်သလို
တိုင်းပြည်ချမ်းသာဖို့ ပြည်သူတွေ လူတန်းစေ့
နေသရွေ့တော့ အလှမ်းဝေးနေပါဦးမယ် ...
Crd# သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦး
Posted by sayanyein at 6:14 PM No comments:
"ရောင်းမည် " ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှောင်လမ်းမကြီးဘေး ၊ နှီးဘုရားမုဒ်ဦးအနီး ၊ နှင်းဆီဖြူ ဟော်တယ်နှင့် ၂ ခြံကျော် ၊ စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်အချက်အချာကျပါသည် ၊ မျက်နှာစာ ပေ ၆၀ ၊ နောက်ဖက် ၅၀ ၊ ဘေး ၁ ဖက် ၅၀ ပေ ၊ ကျန်ဘေး ၁ ဖက် ၄၀ပေ ၊ ရပ်ကွက်ကြီးမြေ ၊ ရပ်ကွက်ကြီး ၁၅ ၊ဖောင်းတော ၊ ကြည့်ရှုပြီး စိတ်ဝင်စားပါက Ph
ကိုဇော် မေမြို့ added2new photos — with Shwe Zin and9others.
ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှောင်လမ်းမကြီးဘေး ၊ နှီးဘုရားမုဒ်ဦးအနီး ၊ နှင်းဆီဖြူ ဟော်တယ်နှင့် ၂ ခြံကျော် ၊ စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်အချက်အချာကျပါသည် ၊ မျက်နှာစာ ပေ ၆၀ ၊ နောက်ဖက် ၅၀ ၊ ဘေး ၁ ဖက် ၅၀ ပေ ၊ ကျန်ဘေး ၁ ဖက် ၄၀ပေ ၊ ရပ်ကွက်ကြီးမြေ ၊ ရပ်ကွက်ကြီး ၁၅ ၊ဖောင်းတော ၊ ကြည့်ရှုပြီး စိတ်ဝင်စားပါက Ph no : 09 444 01 10 01ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည် ။
Image may contain: sky, cloud, house, tree and outdoor
36You, Shwe Zin, Sakar War and 33 others
Hla Myint "ရောင်းမည် "
Aung Myint Han
Aung Myint Han ကျွန်တော့် အောင်ချမ်းသာကခြံကော ရောင်းခြင်လို့ပါ။
မန်း မေမြို့ အဆင်းလမ်းဘေး ၃၂မိုင်၆ဖာလုံမှာ။ ငါးဧက။
တရက်ဂါလံငါးသောင်း(နွေရာသီ)ထက်တဲ့ရေထွက်ပါ။ မျက်နှာဖွင့်ပေ ၇၃၀။ ၀၉ ၇၉၄၉၀၅၂၅၇။
ကိုဇော် မေမြို့ ဟုတ် .... ကိုအောင်မြင့်ဟန် ၊ ဘယ်လောက်လဲဗျ ? အရင် ကညွတ်စိုက်ခဲ့တဲ့ အကွက်ကြီး သိတယ်ဗျ ...... ကျနော်က ချယ်ရီ စိုက်/ဆေး အနီးစခန်းက ကိုဝင်း အကိုပါဗျ .....
Hla Myint dear u Aung Myint Han,
plz contact with ko win uplander / Aneesakhan library.
u win uplander is in estate biz....See More
Image may contain: bird, sky and outdoor
Aung Myint Han တသောင်းနှစ်ထောင်လောက် လိုခြင်တာဗျ။
Hla Myint Ph no : 09 444 01 10 01ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည် ။
ကိုဇော် မေမြို့ ခေါ်တာတော့ခေါ်ရမှာပေါ့နော် ၊ မြေဆိုတာကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ်ပဲကိုး ၊ နေရာကလည်း နေရာကောင်းပဲလေ ...... ပုံစံ ၇ တော့ ကျထားပြီးပြီလား ?
Posted by sayanyein at 7:22 AM No comments:
Price of Chinese veto တရုပ်ကြီးတဉီးက ရန်ကုန်လေဆိပ် အသစ်လုပ်ခွင့်ရတယ်
Price of Chinese veto.
Khin Maung Tint
February 17 at 7:42pm ·
တရုပ်ကြီးတဉီးက ရန်ကုန်လေဆိပ် အသစ်လုပ်ခွင့်ရတယ်။နောက်တဉီးကဘူတာကြီးဆောက်ခွင့်ရတယ်။ကွီးဖြိုးကဉီးဆောင်နစ်ကူးနေပြီ။ပွဲပြီးနေပါပြီဗျာ။
3You, Khin Maung Tint and ကိုဇော် မေမြို့
Hla Myint စီကျင်ပင်း ၀မ်ဆွေ့ 
deep respect for Big Brother Xi Jing Ping.
Posted by sayanyein at 6:01 AM 1 comment:
၈၈၈၈ ပါတီ တရား ၀င် ပါတီ ခွင်. မပြုသေး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး က စဉ်းစား ခန်းဝင်ဆဲ https://twitter.com/hlamyint1940/status/965490953111846912
၈၈၈၈ ပါတီ တရား ၀င် ပါတီ ခွင်. မပြုသေး
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး က စဉ်းစား ခန်းဝင်ဆဲ
Posted by sayanyein at 5:46 AM No comments:
my missions are to protect enviroment; to enhance human rights; to grow trees; to give people the power to share and make the world more open and connected; this is exactly the sacred mission of every person; if our thoughts, words & deeds interfere or block free flow , we are committing ah ku sala dhamas "sins". Hla myint from mandalay with love.
တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယ ၂ နိုင်ငံစလုံးအနေနဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်သိ...
ကုလ လူ့အခွင့် အရေး မဟာမင်းကြီးက ဗမာအစိုးရနှင့် စစ်...
Hla Myint " မသေမချင်း အုပ် ချုပ်တော. မဲ." စီကျင်း...
Moe Zaw added3new photos. March2at 8:56am · #...
pls enrich my block thanks